Madaxweyne Seçer wuxuu baaritaan ku sameeyaa Dekada Taşucu | RayHaber
HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinMadaxweynaha Seçer wuxuu baaraa Dekada Taşucu
05 / 10 / 2019 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, TURKEY
madaxweynaha sirta ah ee loo yaqaan tasucu wuxuu baaritaano ka helay dekada
Duqa magaalada Mersin degmada Metropolitan Vahap doorashada, degmada Metropolitan, Turkey ee kala soocin kaliya ee lagu addoonsi iyo in degmooyinku waxay xaq u leeyihiin in ay ku shaqeeyaan dekedda baaritaan caalami ah Taşucu Harbor. Ka helitaanka macluumaadka shaqaalaha idman ee dekada leh ee xamuulka qaada iyo rarka rakaabka ah, Seçer wuxuu booqday aagga wuxuuna helay macluumaad ballaaran oo ku saabsan dekada.
Duqa magaalada Seçer, oo fuliyay qiimeynta dekedaha baaritaanka kadib, wuxuu yiri: ols Ha noqoto deked hagaagsan. Aynu ka dhigno kuwa ku habboon inay qaadaan xamuulka iyo rakaabkaba. Aynu hagaajino xaaladaha jirka. Halkan waxaan ku horumarin karnaa goob hawleed oo ah nooc marina. Waa deked ku habboon. Kuwani waxay u baahan yihiin maalgelin muhiim ah shuruudaha lacagta. Iyadoo la adeegsanayo mashruuc caqli leh, ka dib waxaan ku sameyn karnaa Dekadeena Taşucu annagoo u hoggaansanna heerarka caalamiga ah ee leh qaab ganacsi oo mihiim ah. ”
"Waxaan nahay degmada kaliya ee awood u hawlgala dekedda caalamiga ah iyo caadooyinka Turkiga"
Madaxweyne Seçer, oo baaritaano ka sameeyay Port Taşucu, wuxuu yiri, Rakaabka yolcu iyo gaadiidka xamuulka ayaa halkan lagu sameyn karaa. Waxaa jira wax gaar ah oo ku saabsan meeshan. Dekedaha iyo dekedaha caalamiga ah. Degmo ahaan, waxaan leenahay muuqaal gaar ah; Waxaan degmada waa wacdi iyo mid dekedda caalamiga ah ee ka hawlgala dalka Turkiga. Waxaan baaray xaaladaha jir ahaaneed ee halkan waxaan ka helay macluumaad asxaab idman. Waxaan ka helnay labadaba saaxiibbada la fasaxay ee qaybta mas'uulka ka ah Degmadeena Caasimadeed iyo agaasimaha Wasaaradda Kastamyada. ”
Dekadda waxaan ku leennahay mashruuc-qoto-dheer xididdada dekeddan ”
Secer wuxuu intaas ku daray inay lahaan doonaan qoondeyn muddo dheer ah si ay dekada ugula shaqeeyaan si hufan oo hufan oo ay shirar la yeelan doonaan hay'adaha la xiriira ujeedadan. Haddii aan tan bixinno, waxaan dooneynaa inaan halkaan ka hirgalino mashruuc. Ka dhig marin deked aad u wanaagsan. Aynu ka dhigno kuwa ku habboon inay qaadaan xamuulka iyo rakaabkaba. Aynu hagaajino xaaladaha jirka. Halkan, waxaan ku horumarin karnaa goob hawleed sida marina. Waa deked ku habboon ”.
“Waxaan dekada u soo qaadan karnaa heerar caalami ah oo leh mashruuc caqli badan”
Duqa magaalada Seçer ayaa intaa ku daray in mashaariicda ay ka fiirsanayaan ay u baahan yihiin maalgashiyo halis ah wuxuuna yiri, ile Iyada oo la adeegsanayo mashruuc caqli gal ah, markaa waxaan sameyn karnaa Dekadeena Taşucu iyada oo la jaan qaadaya heerarka caalamiga ah ee leh qaab ganacsi oo mihiim ah. Waxaan rabnaa inaan keenno deked noocaas ah gobolkayaga anagoo qabanayna howlahan, laakiin dabcan waxay kuxirantahay ogolaanshaha hay'adda laxiriirta. Haddii aan sameyn karno qoondeyn dheer ama aan heshiis kiro, waxaan awood u yeelan doonnaa in aan hirgalinno dhammaan mashaariicdan ”.
Duullimaadyada caalamiga ah waxaa laga sameeyaa Port Taşucu, oo loo qaybiyaa qaybaha 3, oo ay ku jiraan hoyga kalluumeysiga, marin-biyoodka, dekeda iyo aagga isku xidha, dekedda caalamiga ah. Dekadda halkaas oo safaro loogu tago TRNC ayaa loo habeeyey, gaar ahaan inta lagu jiro bilaha xagaaga, doon-yarooyinka iyo doonyaha dalxiisyada maalinlaha ah ee dadka u qaada 1000-1500 dadka tagaya Silifke. 7 waxay isticmaashaa dekada dekeda ku shaqeysa salka saacada 24 maalinta doonida, markabka rakaabka, rakaabka ro-ro iyo markab xamuul, markab xamuul oo qalalan, markab xamuul oo guud, basaska bada, markab markab, doonyo iyo maraakiib kaluumaysi.
Duqa magaalada Seçer oo ka shaqeeya Aqoonta iyo Dayactirka ME andOT
Mersin Greater 76 si loo Iibsado Bas Cusub,…
Madaxweyne Karaosmanoğlu Durmazlar In warshada ...
Duqa magaalada Çelik wuxuu ku sugan yahay General Hulusi Akar Boulevard v
Duqa Magaalada Celik wuxuu joogaa Isgoyska Terminal Storey…
Duqa Magaalada Büyükkılıç, Derevenk Viaduct iyo Xiriirka…
Madaxweynaha İmamoğlu Bayrampaşa ilen
Madaxweyne İmamoğlu garoonka diyaaradaha Havaalanı ee Istanbul
Duqa Magaalada İmamoğlu oo ku yaal Beşiktaş Deegaanka Qodista…
Duqa magaalada Mutlu wuxuu imtixaan ka qaadaa wadada Ringta
Mudaaharaadkii Koeshker oo lagu baaray Istasyon Deriska
Guddoomiyaha dagaal hadon sida dhaqsaha badan ee Turkey Ship ...
Madaxweynaha İmamoğlu wuxuu baaraa Galataport
markab xamuul ah